Somaliland: Warbaahinta Kenya oo ka Faallootay Xidhiidhka isa Soo Taraya ee Somaliland la Yeelanayso Dalalka Afrika - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Warbaahinta Kenya oo ka Faallootay Xidhiidhka isa Soo Taraya ee Somaliland...
Somaliland: Warbaahinta Kenya oo ka Faallootay Xidhiidhka isa Soo Taraya ee Somaliland la Yeelanayso Dalalka Afrika
Warbaahinta Kenya oo ka Faallootay Xidhiidhka isa Soo Taraya ee Somaliland la Yeelanayso Dalalka Afrika
Qaar ka mid ah Warbaahinta dalka Kenya ayaa ka Faallooday socdaalka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ku joogo dalka Guinea ee ku yaalla galbeedka Afrika, oo uu martiqaad ka helay Madaxweyne Alpha Conde.
Wakaallada Wararka Somaliland ee SOLNA, ayaa soo turjuntay Telefishanka K24 TV oo laga leeyahay dalka Kenya, waxaanubooqashada madaxweynaha Somaliland ee Guinea ku sifeeyey”Tallaabo kale oo Somaliland u qaaday dhinaca diblomaasiyadda.”
Kenya 24TV wuxuu intaas ku daray in socdaalka madaxweyne Muuse Biixi uu calaamad dhab ah u yahay sida dalalka Afrika u aqbalayaan inay Somaliland la yeeshaancilaaqaad Ganacsi iyo dhaqaale oo koraya.
Telefishanku wuxuu iftiimiyey in Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Madaxweyne Alpha Condeay ballanqaadeen inay raadinayaan sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen iskaashigooda dhinaca ganacsiga.
K24TV wuxuu sheegay inay Somaliland horusocod ka sameysayqaddiyadda Ictiraaf raadinta, iyadoo ku tallaabsatay inayfursado ganacsi la yeelato dalalka Afrika, waxaanay aaminsan tahay in Somaliland oo ganacsi la yeelata dalalka Afrika iyo kuwa caalamkuba ay faa’iido u leeyihiin xoojinta ammaanka, horumarka iyo xasiloonida.
Waxa kalooK24TV sheegay in dawladda Kenya ay u heellan tahay inay iskaashi ganacsi la yeelato Somaliland oo ay ka joogaan 10 kun oo Kiiniyaan ah oo u shaqo tagay markii ay arkeen ammaanka ka jira Somaliland u safraysi ay shaqo uga raadsadaan.